Mpanamboatra sy mpamatsy serial tsy misy milina | China Seamless Machine Serial Factory
Masinina fanapahana ultrasound Fusion Edge (Manokana ho an'ny atin'akanjo sy akanjo) MAX-C208
Fampiharana Karazan-damba vita amin'ny simika simika, hoditra vita amin'ny volon'ondry isan-karazany, lamba tsy tenona, landihazo voapoaka Sarimihetsika thermoplastic, plastika plastika simika, sns. Manokana ho an'ny atin'akanjo sy bra tsy manam-petra. Toetra mampiavaka ny andiany ankapobeny 20KHz, afaka manamboatra andiany 15KHz amin'ny alàlan'ny 1000w ka hatramin'ny 2500w isika hiatrehana ny PP, fitaovana malemilemy PE, savaivony goavam-be ary asa-lava lava be hamaly ny filan'ny mpanjifa, ampiharina amin'ny indostrian'ny kilalao plastika, elektronika, trano ...
Masinina fanapahana fantsom-pifandraisana ultrasound MAX-2602
Fampiharana atin'akanjo vehivavy tsy misy tanany, pataloha ho an'ny lehilahy, kiraro kiraro tsy misy fanjaitra, akanjo milomano tsy misy fangarony, lobaka fanatanjahan-tena, palitao ivelany, akanjo bisikileta, tranolay sns. Toetra mampiavaka ny fahita matetika, ny hafainganana ary ny fanerena amin'ny alàlan'ny alàlan'ny elektronika, ny fametrahana ny marina ary ny famerimberenana ny fizotry ny fifamatorana, ny ankamaroan'ny fitaovana miempo mafana, ny lamba vita amin'ny laminated, ny lamba, dia azo ampiasaina. Teknolojia Parameter Teknika: AC200-240V / 50-60Hz Herin'ny tanjaka: 2000W Herin'ny ultrasound: 850W Haute ultrasound: 18-20K Hafainganan'ny fikirakirana: 0.5-10m / m ...
Masinina fanaingoana ultrasonic MAX-2601
Fampiharana atin'akanjo vehivavy tsy misy tanany, pataloha ho an'ny lehilahy, kiraro kiraro tsy misy fanjaitra, akanjo milomano tsy misy fangarony, lobaka fanatanjahan-tena, palitao ivelany, akanjo bisikileta, tranolay sns. Toetra mety amin'ny fanamafisana ny lohan'ny loha, ny tsindry ary ny fotoana dia azo ahitsy mba hahitana ny takian'ny fitaovana samihafa. Haingam-pandeha ara-teknika: 0.5-10m / min Ny sakany miasa: 1-10mm Faharetan'ny asa: 35KHz Tsindry miasa: 0,5Mp
Masinina malalaka tsy miova (max 6cm Vaovao) MAX-910-B1
Masinina mitambatra Varingarin'ny Varingarin'i MAX-920
Fampiharana atin'akanjo vehivavy tsy misy tanany, pataloha ho an'ny lehilahy, kiraro kiraro tsy misy fanjaitra, akanjo milomano tsy misy fangarony, lobaka fanatanjahan-tena, palitao ivelany, akanjo bisikileta, tranolay sns. Toetra mampiavaka ny Uper sy ny roller ambany dia manitsy ny hafainganana hafainganam-pandeha, ny programa 10shrinkage dia azo tehirizina, ny fanitsiana miankina amin'ny hafanan'ny tanky fanafanana, ny tsindry amin'ny roller dia azo ovaina, ny tontonana fiasan'ny efijery, ny safidy betsaka amin'ny kojakoja samihafa sy ny fitaovana ilaina amin'ny famokarana. Taratasy parameter teknika: AC 200-2 ...
Masinina Hemming mirindra MAX-W900-C
Fampiharana Aforeto ny peratra kapoaka bra. Toetra mampiavaka ny rafitra fanamafisam-peo tsy miankina 3 sy ny fiasan'ny vava avo roa heny, miantoka ny fanamainana ny vokatra, ny fifehezana tsy miankina ny haavon'ny rivotra mitsoka, ny fanerena fehikibo azo ahitsy. Ny interface interface dia tsotra sy intuitive. Parameter teknika TOSIKARATRA: AC 200-240V / 60Hz Hafainganana amin'ny famahanana: 0-10meter / minitra Sakany Tyre: 上 -Up12mm, 下 -Down20mm Herinaratra: 2000W Temperature: 0-300oC Fanerena miasa: 0.5Mpa
Masinina fandefasana fandriana fandriana MAX-900-E
Fampiharana atin'akanjo vehivavy tsy misy tanany, pataloha ho an'ny lehilahy, kiraro kiraro tsy misy fanjaitra, akanjo milomano tsy misy fangarony, lobaka fanatanjahan-tena, palitao ivelany, akanjo bisikileta, tranolay sns. Ireo milina dia manana faritra lava mifamatotra lava sy rafitra fanamafisam-peo 4 izay azo antoka ny fahombiazan'ny fifamatorana. Ny hafainganam-pandeha dia mety hahatratra 8 metatra isa-minitra, manatsara ny fahombiazany. Ny hafainganana, ny mari-pana ary ny tsindry dia azo ahitsy ho an'ny fiakarana sy fehikibo, mandritra izany, ny mari-pana mialoha ny hafanana sy ...
Masinina mamoritra milamina MAX-900/20/40
Fampiharana atin'akanjo vehivavy tsy misy tanany, pataloha ho an'ny lehilahy, kiraro kiraro tsy misy fanjaitra, akanjo milomano tsy misy fangarony, lobaka fanatanjahan-tena, palitao ivelany, akanjo bisikileta, tranolay sns. Ireo milina dia manana faritra lava mifamatotra lava sy rafitra fanamafisam-peo 4 izay azo antoka ny fahatanterahan'ny fifamatorana. Ny hafainganam-pandeha dia mety hahatratra 8 metatra isa-minitra, manatsara ny fahombiazany. Ny hafainganana, ny mari-pana ary ny tsindry dia azo ahitsy ho an'ny fiakarana sy fehikibo, mandritra izany fotoana izany, ny toetr'andro miakatra mialoha ...
Masinina mifamatotra amin'ny farafara fisaka ho an'ny fampifangaroana sy ny fandefasana MAX-900-B
Fampiharana atin'akanjo vehivavy tsy misy tanany, pataloha ho an'ny lehilahy, kiraro kiraro tsy misy fanjaitra, akanjo milomano tsy misy fangarony, lobaka fanatanjahan-tena, palitao ivelany, akanjo bisikileta, tranolay sns. Fiasa mampiavaka: fampifangaroana sy fampifangaroana ny bra, panty, pataloha sns. Parameter teknika TOSIKARATRA: AC 200-240V / 60Hz Hafainganana famahanana: 0-10meter / minitra Herinaratra: 2000W Tyro sakany: 20mm sakany amin'ny faritry ny tazo: 10mm, 15mm na ekeo ny hafanan'ny fanaingoana. : 0-300oC 工作 气压 Tsindry miasa: 0,5Mpa